Argentina promotes gastronomy tourism through China's largest video platform | Culinary Travel News
Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » IArgentina ikhuthaza ukhenketho lwe-gastronomy ngeqonga elikhulu levidiyo lase China
IArgentina ikhuthaza ukhenketho lwe-gastronomy ngeqonga elikhulu levidiyo lase China
Ngokhenketho oluphumayo olubonakalise ukukhula okuzinzileyo okuqinileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo, i-China imele amathuba ophuhliso angapheliyo. Ngokuhambelana nezi zikhombisi, ukufika kwabakhenkethi baseTshayina eArgentina kuye kwaphindaphindeka kathathu kwangelo xesha linye.
Ke, ukuze ubeke indawo yabakhenkethi kwimakethi yaseTshayina nangakumbi, nangaphakathi kwesivumelwano sokukhuthaza iArgentina neFliggy, iqonga labakhenkethi leqela laseAlibaba, ilizwe eliziinkwenkwezi njengomlingisi ophambili kuxwebhu olubizwa ngokuba yiParadise yePlanethi , idluliselwe ngo-Youku.
Yaziswa ngo-2006, i-Youku lelona qonga likhulu levidiyo lase China. Eli qonga, elinabasebenzisi abazizigidi ezingama-300, liyinxalenye yolonwabo kunye nomxholo wedijithali wendalo ekhankanywe ngasentla yeAlibaba. Kweli qonga, www.youku.com, abasebenzisi banokubona uthotho, imiboniso yokwenyani, iimuvi, amaxwebhu, imicimbi yezemidlalo kunye nemiboniso yabantwana, phakathi kwezinye izibonelelo.
IArgentina inelungelo lokuba kuphela kwelizwe elingaphandle kwe China elithatha inxaxheba kwi-Banquet Planet documentary, imveliso enikezelwe kwihlabathi le-gastronomic, kwizahluko ezili-12 ezinemizuzu engama-30 inye. Ilizwe lethu ngumlinganiswa ophambili kwisahluko sesi-3 nesesi-4, ezathi zamiselwa kwiqonga laseYouku nge-30 ka-Okthobha ne-6 kaNovemba, ngokwahlukeneyo. Ukuza kuthi ga ngoku, abasebenzisi abazizigidi ezingama-81 sele bezibonile ezi zahluko.
“I-China yenye yezona ntengiso zibalulekileyo eziphuma ngoku. Kule minyaka idlulileyo, senze inkqubela phambili ebonakalayo ukuze abakhenkethi baseTshayina bakwazi ukwazi ngathi kwaye basityelele, njengokuququzelela ii-visa, isivumelwano noFliggy kwaye, kule meko, ukukhuthazwa ngo-Youku. Isicwangciso sedijithali sesinye sezinto eziphambili kulawulo lwethu kwaye iziphumo ezintle esizifumeneyo zisikhuthaza ukuba siqhubeke ngale ndlela ”, utshilo uNobhala wezoKhenketho, uGustavo Santos.
Kuhambo oluhamba kunye ne-gastronomy yendawo, umsasazi wenkqubo, u-Alan Yu-umpheki owaziwayo e-China, onamava kwindawo zokutyela ezi-2 kunye nezi-3 ze-Michelin, kwaye wonyulwa ukulungiselela ezona zitya zibalaseleyo ze-Michelin ngo-2018 nango-2019. Uhambo oluqala ngo-Septemba 15 ukuya ku-25 kunye nezibonelelo zokupheka zeSixeko esizimeleyo saseBuenos Aires, e-Ushuaia, idolophu elikomkhulu laseTierra del Fuego, e-Antarctica nase-South Atlantic Islands, nase-El Calafate, kwiPhondo laseSanta Cruz.
Kwikomkhulu ledolophu yaseArgentina, iigrill, imivalo eqhelekileyo, iTango kunye nomdla webhola ekhatywayo yayiyinxalenye yamava. Uluvo lwe-documentary yayingekokubonisa nje izitya ukuba zingcamlwe, kodwa yayikukutolika yonke ikhonkco lemveliso ide ifikelele esiphelweni esidlangalaleni. Ke ngoko, eBuenos Aires, ukhenketho lwaluquka utyelelo kwiNtengiso yeLiniers, edume ngokurhweba ngenkomo, kunye nohambo lukaDon Julio, ophethwe nguPablo Rivero.
E-Ushuaia, ukuphela kwesiXeko seHlabathi, u-Yu uthathe umceli mngeni wokuhamba ngomjelo we-Beagle kwaye akhangele ezinye zezona zinto ziphambili ze-Fuegian zokunikeza okumnandi: unonkala wesigcawu kunye ne-shrimp ebomvu. Kunye noLino Adillón, ovela kwivenkile yokutyela yakwaVolver, wayenokungcamla izitya kwaye achaze nokuba zazimnandi kanjani.
Imvana kaPatagonian, isithembiso esingoyikiyo sePatagonia, asishiywanga ngaphandle. EMorada del Águila, ivenkile yokutyela yaseCerro Castor, iqela lamaTshayina linokuba namava ngokusondela ekulungiseleleni oku kulunga kwePatagonian.
Imveliso yaphela e-El Calafate, kwiKomkhulu leSizwe leGlaciers. Yilapho u-Yu evuyiswa ngabasebenzisi nge-asado ekhangelekayo phambi kwePerito Moreno Glacier.
Ukufezekiswa kwezahluko zePlanethi yeBhanki eArgentina kuyinxalenye yesicwangciso esikhulu sedijithali esenziwa ngu IZiko leSizwe loPhuhliso loKhenketho (i-Instituto Nacional de Promoción Turística - INPROTUR). Le projekthi ixhaswe luLawulo lweePaki zeSizwe kunye neCerro Castor.